Can Indian citizens travel to Bulgaria? Bulgaria visa for Indians – ALinks
Ngaba ubucwangcisela ukutyelela iBulgaria? Kodwa bekudida xa ufaka isicelo seVisa yase-Bulgaria yase-India. Fumana lonke ulwazi olufunekayo lweVisa yaseBulgaria, okt, Inkqubo, ukufaneleka, kunye namaxwebhu afunekayo kwiVisa yaseBulgaria.
Ngaphambi kokungena kwiRiphabhlikhi yaseBulgaria, abantu baseIndiya bafuna i-visa. Kufanelekile ukufumana iimvume zeBulgaria kwi-Embassy yaseBulgaria eIndiya. Uhlobo lweVisa olufunekayo ukungena eBulgaria luya kuxhomekeka kwizinto ezininzi, ezinje ngenjongo yotyelelo olucetyiweyo kunye nobude.
1. KwiVisa yaseBulgaria, ilizwe laseIndiya eliphethe ipasipoti esemthethweni yaseIndiya inokufaka isicelo
2. Ezokhenketho / uSapho okanye uTyelelo / izihlobo zeshishini, abantu abanqwenela ukuya eBulgaria bangafaka isicelo sokundwendwela ngeVisa Lounge. Nge-Visa Lounge, umntu ofuna umsebenzi eBulgaria akafanelekanga ukuba afake isicelo.
3. I-inshurensi yokuhamba yabahambi abhabhela eBulgaria yimeko esisinyanzelo. IVisa Lounge ikwabonelela abahambi ngeinshurensi yokuhamba ngeendleko ezongezelelweyo.
Amaxwebhu ayimfuneko kwiVisa yaseBulgaria:
I-Visa yaseBulgaria kufuneka ibenamaxwebhu:
Ipasipoti yokuqala enobunyani beenyanga ezintandathu ubuncinci kunye nobuncinci bamaphepha ama-3 angenanto + zonke iipaspoti ezindala ukuba zikhona
2 Ukutshekishwa ngokutsha kwemifanekiso emitsha. (Inkcazo yePhoto);
Iifom zesicelo seVisa: zigcwalisiwe zaza zatyikitywa
Incwadi eyimfihlo: inkcazo yenjongo yokuhambela ilizwe
Isiteyitimenti seBhanki sasekuqaleni: isitampu kwaye sihlaziyiwe ngetywina lebhanki kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo
Iinqwelomoya zokuhamba: ubungqina bokubuya kwetikiti lenqwelomoya kwilizwe lakho lasekhaya nasemva
Ukubhukisha ihotele: ubungqina bendawo yokuhlala yakho yonke
Isicwangciso sokuhamba: ishedyuli yobulumko yosuku echaza zonke izinto zohambo
I-inshurensi yendiza: egubungela bonke ubude bohambo
IVisa yabakhenkethi yamaIndiya:
1. Ipasipoti: incwadana yokundwendwela yokuqala eneenyanga ezintandathu ubuncinci kwaye ubuncinci bunamaphepha amabini angenanto esitampu sephepha.
A) Ukukopa onke amaphepha epasipoti asetyenzisiweyo, kubandakanya amaphepha angaphambili nangasemva.
(b) Ncamathisela zonke (ukuba zikhona) iipaspoti ezindala
2. IFom yokufaka isicelo seVisa yaseBulgaria: Ifom yesicelo seVisa esizalisiweyo ngokufanelekileyo.
Ukucaciswa kweMifanekiso: Iifoto ezimbini zokugqibela zepasipoti okanye zeepati zokugqibela, iipesenti ezingama-3 -60 yepesenti yokugubungela ubuso, imvelaphi emhlophe, kwaye akukho mda (Ubungakanani: 80 mm x 35 mm)
4. Nceda uqaphele ukuba ifoto akufuneki ukuba indala kuneenyanga ezintathu, iskenwe / ifakiwe, kwaye ingasetyenziswa nakweyiphi na i-visa yangaphambili.
5. Ileta yokugubungela: Ileta yokugubungela evela kumenzi-sicelo entlokweni yeleta yeshishini, ebonisa igama, igama, inombolo yepaspoti, injongo, kunye nobude botyelelo olufutshane. Ileta kufuneka isayinwe ngokufanelekileyo kwaye ithunyelwe kwigosa leVisa, uMzi woZakuzo weRiphabhlikhi yaseBulgaria, eNew Delhi, ngumntu otyikityiweyo ovunyiweyo onesitampu senkampani.
A) Ubuqu be-3 Yrs ITR.
(b) Amashishini kunye neeAkhawunti zeBhanki zobuqu kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo.
C) Ikopi yeKhadi letyala / ukuNgqiniswa nguTshintshiselwano lwaNgaphandle / abaTyeleli baHamba
D) Ubungqina bemali eyoneleyo yokuhlala eBulgaria ngenani elincinci le-Euro 50 ngosuku. Ubuncinci be-Euro 100 ngosuku kulindeleke ukuba umfaki sicelo afune amalungiselelo endawo yokuhlala.
7. Ukugcinwa kwehotele: Isiqinisekiso sehotele / ubungqina bendawo yokuhlala. (Ukhenketho olungacwangciswanga kwangaphambili)
Nceda uqaphele: amaxwebhu / iivawutsha zoqobo ezikhutshwe nguMbutho wabaKhenkethi / uMsebenzi woKhenketho ohlawulelwa kwangaphambili, oqulethe inombolo yelayisensi yoKhenketho / yenombolo yoKhenketho, kufuneka ikhutshwe liSebe lezoQoqosho laseBulgaria, kunye negama, inombolo yelayisensi yehotele kunye nobude beenkonzo zabakhenkethi ezihlawulelwa kwangaphambili.
8. Itikiti: Itikiti lomoya liqinisekisiwe.
9.I-inshurensi yezempilo Isatifikethi seinshurensi yaphesheya enesambatho esincinci se-EUR 30,000.kubandakanya neendleko zonyango kubude bokuhlala.
10. Ileta yesigunyaziso: Umenzi-sicelo kuyakufuneka athumele incwadi yemvume egunyazisa ukuqokelelwa kwamaxwebhu.
A) Inkangeleko yobuqu iyafuneka
(b) Amaxwebhu oqobo kufuneka angeniswe, kwaye ikopi yawo kufuneka incanyathiselwe kwifom yesicelo sevisa.
(c) Abafakizicelo abaphethe i-visa esebenzayo yokungena kwi-Schengen banokuhamba baye eBulgaria ngaphandle kokufumana i-visa eyahlukileyo.
(e) Ungeniso oluninzi eBulgaria luvumelekile kubanini beephepha-mvume zexesha elide okanye zamaphepha-mvume okuhlala anikezwe ngamazwe aseSchengen ixesha lokuhlala ukuya kwiintsuku ezingama-90 kuzo naziphi na iinyanga ezintandathu ukusukela kumhla wokungena okokuqala.
UQHAGAMSHELWANO / Umzi wozakuzo
IRiphabhlikhi yase-Bulgaria yoZakuzo
Idilesi: EP 16/17 Chandragupta Marg, Delhi Chanakyapuri-1100211 Chandragupta Marg
Inombolo yomnxeba: 011-26115549
Ixesha lokungeniswa: iiyure ezili-1000-iiyure ezili-1200 (NGOMVULO, NGOLWESITHATHU, NGOLWESINE)
Amaxesha okuqokelela: iiyure ezili-1000-iiyure ezili-1200 (NGOMVULO, NGOLWESITHATHU, NGOLWESINE)
Kuya kuthatha ixesha elingakanani?
I-10 ukuya kwi-15 yeentsuku zokusebenza (i-approx.)
IVisa kunye nezinye iifizi zinokuhlawuliswa ngabafakizicelo ngamakhadi etyala, amakhadi etyala, kwiibhanki ezipheleleyo
IBULGARIA IXESHA LEVISA
IIMALI ZEVISA (INR)
IVisa yoShishino 5100
Ndiza kufaka isicelo kungekudala kwi-intanethi kwi-visa eya eBulgaria?
Umhla wokuqala wokufaka isicelo se-visa ukuya eBulgaria ziinyanga ezintathu ngaphambi kokuya kwilizwe elicingelwayo. Kuyacetyiswa ukuba zonke izicelo ze-visa zingeniswe ubuncinci kwiintsuku ezingamashumi amabini ngaphambi kohambo ukuvumela ixesha lokuqhutywa kwe-visa.
Ndingasifaka isicelo seBulgaria Visa Online?
Ewe unokufaka isicelo kwi-Intanethi nge-E-VISA.
Kubemi bamazwe angaphezu kwe-150, kubandakanya iBulgaria kunye neRiphabhlikhi yaseNyakatho yeMakedoniya, amaziko e-Visa ngoku avulekile. Kumacandelo amahlanu, i-Visa iyatholakala:
I-Visa yabaNcedisi ngezoNyango
Imiyalelo yokufaneleka, ukugcwaliswa kweefom ze-e-Visa, njl. Yonke inkqubo yokufaka isicelo ikwi-Intanethi. Umenzi-sicelo akadingi kutyelela uMzi woZakuzo we-E-Visa. Unokufaka isicelo kwi-Intanethi kumfaki sicelo wasekhaya kwikhonkco: http: /indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html.
2. La maqela ayakuvunyelwa ukuba abe neklabhu yomntu wasemzini.
3. Ugunyaziso lwevisa luya kukhutshwa kwithuba leentsuku ezine.
4. Kungenzeka ukuhlawula intlawulo ye-e-Visa ekhompyutheni usebenzisa amakhadi etyala / okuthenga.
5. Iindwendwe zinokuya eIndiya zine-Electronic Travel Authorization (ETA), i-Electronic Travel Authorisation (ETA), ipaspoti, itikiti lokubuya, itikiti lokuya kwelinye ilizwe, kunye nemali eyaneleyo yokuchitha ebudeni bokuhlala kwabo eIndiya.
Ipaspoti kufuneka isebenze ubuncinci iinyanga ezintandathu ukusukela ngomhla wokufika e-India kwaye igximfizwe ngamaphepha amabini angenanto ligosa lezokufika.
7. Umenzi-sicelo makabhabhe nencwadana yokundwendwela afake isicelo kuyo i-eVisa. Ukungena e-India kwipasipoti entsha kuya kuvunyelwa nokuba i-ETA ikhutshiwe kwipasipoti endala, kodwa ke kwiimeko ezinjalo, umenzi-sicelo kufuneka abe nepasipoti yakudala apho i-ETA yayikhutshiwe.
8. Iizikhululo zeenqwelo moya ezingama-24 ezinamagama (okt, Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Calicut, Chennai, Chandigarh, Coimbatore, Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Pune, Tiruchirapalli, ITrivandrum kunye neVaranasi) kunye namazibuko amathathu anegama (okt, Cochin, Goa, Mangalore) ziyafumaneka xa zifika kwiziko. Umphambukeli, nangona kunjalo, angathatha ikhefu nakweyiphi na i-India evunyiweyo yokuThunyelwa kwelinye ilizwe (ii-ICPs).
I-Visa yaseBulgaria yamaNdiyaAmaxwebhu ayimfuneko kwiVisa yaseBulgariaIVisa yabakhenkethi yamaIndiya
Uyifumana njani i-visa yabakhenkethi eThailand?
IVisa yaseArgentina yamaIndiya
Amazwe aSimahla eVisa ePalestine
Indlela yokufudukela eKhanada
Ungasifaka njani isicelo sokhuseleko eChile? Iimbacu eChile